Soomaali badan ayaa lagu xirxiray meelo adduunka ka mid ah - BBC News Somali
Soomaali badan ayaa lagu xirxiray meelo adduunka ka mid ah
Image caption Police hawl gal ku guda jira
12 qof oo Soomaali ah ayaa lagu xiray magaalada dekedda ah ee Rotterdam ee dalka Netherlands, kuwaas oo lagu tuhunsan yahay inay damacsanaayeen in ay ku kacaan dembiyo argagixiso.Xeer ilaaliyeyaasha dalkaasi waxay sheegayaan in warar xagga sirdoonka Dutch-ka ay muujinayaan in tiro Soomaali ah ay maleegayaan weerar.
Dukaan telefoonnada lagu iibiyo, afar guri iyo laba qol ee hotel yar oo la seexdo ayaa la baaray hase ahaatee wax hub ah ama qalabka qarxa lagama helin. lix ka mid ah waxay ku nool yihiin magaalada Rotterdam, shan ka mid ahna ma la cinwaan ay deggan yihiin. midna waxaa uu haystaa dhalashada dalka Denmark.
Qaar ka mid ah weli go'aan lagama gaarin dhalashadooda. waxaana police-ku ay sheegeen in raggaasi ay hadda su'aalo weydiinayaan, saddex maalmood gudahoodna lagu hor geyn doono xaakim si uu go'aan uga gaaro in xabsiga lagu sii hayo iyo in kale.
Kadib qaraxii toddobaadkii hore magaalada Nairobi ee dalka Kenya lala beegsadey bas ku sii jeedey Uganda, ayaa waxaa booliska Tanzania dhankooda ay bilaabeen hawl gallo lagu soo qabqabtay ilaa 200 oo qof oo Soomaali ah.
Dadkaasi ayaa badankoodu waxay yihiin kuwo haysta waraaqo sharci ah, hase yeeshee boolisku waxay sheegeen inay baarayaan in dadkaasi ay faraha kula jiraan falala argagixiso iyo in kale iyo in la hubiyo dokumentiga ay sitaan.
ilaa 75 qof oo Soomaali soo galow ah ayaa lagu xirxiray gobolka Hadramaut ee dalka Yemen, kuwaas oo ay ku jiraan carruur iyo haween. dadkaasi waxaa loo qaaday xero qaxooti ku meel gaar ah oo ku taalla magaalada Maifa iyadoo lala kaashaday hay'adda qaxootiga ee Qaramada idoobay ee UNHCR.
ilaa sanadkan waxaa dalka Yemen tegay kumannaan dad Afrikaan ah oo u badan Soomaali iyo Ethiopian. sanadkii hore waxaa la diiwaan geliyay 54, 000 qof oo soo galow ah. Yemen waxay sheegtay inay hadda dalkeeda ku sugan yihiin ku dhowaad hal milyan oo Afrikaan ah, kuwaas oo culays ku haya dhaqaalaheeda iyo ammaanka dalkeeda. waxayna Yemen beesha caalamka ka codsatay gargaar dheeraad ah si ay ugu babac dhigto qaxootiga dalkeeda ku soo qulqulaya.